bhimphoto: फेरि सुनाउलान् हरिराजले हार्मोनियम
दशकअघिको एउटा भजन अहिले पनि रेडियो नेपालको धार्मिक कार्यक्रममा बज्छ । श्रोता र कार्यक्रम प्रस्तोताले सम्झनामा नराखेको नाम हुन सक्छ— हरिराज राजवंशी । उनी मोफसलका जो परे ।
'जय होस् शिवशंकर त्रिपुरारी, जय होस् पशुपतिनाथ भक्त हितकारी...' का सर्जक हरिराज केही समययता गुनगुनाउनै नसक्ने अवस्थामा छन् । विराटनगर-४ का ६४ वषय संगीतकर्मी एकल एल्बमको तयारी गर्दै रहँदादेखि धेरै बिरामी परे । एकातिर सांगीतिक सक्रियता परिवार चलाउने दरिलो माध्यम बन्न नसक्नु, अर्कोतिर रोगको पिरलो । करिअरमा थोरै निराशा र रोगको धेरै सकसले सांगीतिक सक्रियता केही वर्ष यता घटाउँदै ल्यायो । मृगौला र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगले थलिएका उनी लामो उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
सानो छाप्राको आँगनमा एक्लै हार्मानियमसँग सुर मिलाइरहेका देखिने हरिराजले अस्पतालबाट सधैंका लागि छुट्टी पाएका होइनन् । बेलाबेला भर्ना गरेर सघन उपचार गरिरहनुपर्छ । 'साताको दुइपल्ट डाइलासिस,' छोरा विनयले भने, 'त्योसँगै दुई पिन्ट रगत पनि चढाउनुपर्छ ।' कुनै बेला गीत लेख्ने, धुन बनाउने अनि आफंै स्वर दिनेमा हरिराज खप्पिस मानिन्थे । भजन, आधुनिक र फिल्मी गीत गरेका उनी आपनो समुदायका गीत-संगीतमा निपुण मानिन्छन् । करिब नौ सय रचनालाई संगीतबद्ध गरेका उनले मातृभाषा राजवंशीसँगै थारू, भोजपुरी र मैथिलीमा तयार पारेका गीत अझै बेलाबखत बज्छन् । थारू भाषाको पहिलो फिल्म 'हमर भाटु' का लागि उनले गीत लेखे, संगीत पनि गरे ।
मेरो आँखाको भाका बुझिदेऊ न हजुर लुटाइदिन्छु मेरो जवानी हजुर...
विराटनगरका उत्साहीले निर्माण गरेको नेपाली फिल्म 'सौभाग्य' को यो गीत लेखेर धुन भर्दा उनले पारिश्रमिक पाएनन् । गीतले जब चर्चा पायो त्यसैलाई पारिश्रमिक माने । अर्को फिल्म 'दुश्मन' र टेलिफिल्म 'आमा' लगायतमा पनि उनले गीतसंगीत दिए । पछिल्ला वर्ष घरैमा साधना गर्दै रहेका भेटिने यी साधकलाई मधुमेह र उच्च रक्तचाप समेतको समस्या भएको डा. रामहरि घिमिरे बताउँछन् । उनका दुवै मृगौलाले काम गर्न छाडेपछि अवस्था अझ नाजुक भयो । चार महिनायता देखिएको यो समस्याको निदानका क्रममा उनलाई २६ पिन्ट रगत दिइएको छोरा विनयले सुनाए ।
एक जमाना उनलाई गीतसंगीतको क्षेत्रभन्दा अर्थोक ध्यान थिएन । त्यही मेसोमा २०२९ मा रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गरे । फिल्मी र लोक-आधुनिक गीत रचना र संगीत संयोजनमा सक्रिय रहँदा उनका गीत उदितनारायण झा, कुमार कान्छा, कविता कृष्णमूर्ति, पूणिर्मा, रामा लगायतले पनि गाएका छन् । रचना, संगीत र गायनका तीनै विधामा रमाएका यी कलाकर्मीलाई बेलाबखतका पुरस्कार र सामाजिक सम्मानले कला क्षेत्रमा डोर्‍याइरह्यो । 'मस्की हिँड्छे रंगिला बुट लगाई, ठिटाहरूको दिलमा छुरा चलाई...' जस्ता तन्नेरी रिझाउने गीत समेटेर 'फेसन द लभ' एकल एल्बम निकाल्ने तयारीकै क्रममा उनी बिरामी भए । बेलाबेला श्वासप्रश्वासका लागि नाकमा अक्सिजनका पाइप लगाइन्छ । स्थानीय नोबेल अस्पतालको शय्यामा एक दिन उनलाई गुनगुनाइरहेको देखेर डा. गोपाल छक्क परेछन् । हरिराज आफैंले लेखेको 'अरू मरेपछि जल्छ चितामा, म ज्यूँदै जल्छु चिन्तामा...' गुनगुनाइरहेका थिए । 'त्यसपछि पो मैले थाहा पाएँ,' डा. गोपालले भने, 'यी बिरामी कलाकार रहेछन् ।'
यी कलाकार अब फेरि गीत-संगीतमा फर्केलान् डाक्टर साब ?
(२०६९ बैशाख १९ गते कान्तिपुर कला र शैलीमा प्रकाशित )
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 7:05 PM